MyanCare | သွားဖုံးကနေ သွေးတွေ ဘာကြောင့် ယိုလာသလဲ?
သွားဖုံးကနေ သွေးတွေ ဘာကြောင့် ယိုလာသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ သွားတိုက်အခါ ဒါမှမဟုတ် အသီးတွေကို ကိုက်လိုက်တဲ့အခါ သွားဖုံးကနေ သွေးတွေထွက်လာတာကို ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
ဒီလို သွားဖုံးကနေ သွေးတွေထွက်လာတာကို သတိထားလိုက်မိပေမယ့် လူတော်တော်များများက ဒါကို လစ်လျူရူ့လိုက်ကြတာများတယ်ဗျ ။ တကယ်တော့ သွားဖုံးကနေ သွေးထွက်လာတာဟာ သွားဖုံးရောဂါတွေ ဖြစ်မယ်တော့လို့ အချက်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ ။
ကျန်းမာတဲ့ သွားဖုံးတွေကနေ သွေးတွေ ထွက်လေ့မရှိပါဘူး ။ ကျန်းမာတဲ့ သွားဖုံးတွေဟာ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ အရောင်ရှိပြီး မျက်နှာပြင်ပုံစံက လိမ္မော်သီးအခွံလိုပဲ အဖုအထစ်လေးတွေရှိသဗျ ။ ဆိုလိုတာက တင်းပြောင်မနေဘူးပေါ့နော် ။ ကျန်းမာတဲ့သွားဖုံးကနေ အနံ့ဆိုးတွေလည်း ထွက်လေ့မရှိပါဘူး ။ သွားဖုံးကနေ သွေးတွေထွက်လာဖို့ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။
အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ သွားဖုံးရောင်တာပါပဲ ။ သွားဖုံးရောင်တာဟာ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါ (သွားဖုံးရောဂါ) ရဲ့အစဖြစ်ပါတယ် ။
ခံတွင်းသန့်ရှင်းမွုမကောင်းတဲ့သူတွေမှာ အစားကြွင်းအစာကျန်တွေဟာ သွားချေးတွေအနေနဲ့ ပါးစပ်ထဲကျန်ခဲ့လေ့ရှိပါတယ် ။ ဒီသွားချေးတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားပေါက်ဖွားပြီး အဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အဆိပ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားကနေ အဲ့ဒီအဆိပ်တွေကို တုံ့ပြန်တဲ့အခါ သွားဖုံးစရောင်လာတော့တာပါပဲ ။
သွားဖုံးစရောင်ပြီး သွေးတွေထွက်လာတာကို လစ်လျူရွုလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ သွားဖုံးမှတဆင့် သွားအမြစ်ပတ်ပတ်လည်ကို စတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ် ။ ဒါဆို သွားဟာ အနည်းငယ်ကြွလာမှာ အမှန်ပဲ ။ ခိုင်ခန့်မွုလည်း လျော့နည်းလာပါလိမ့်မယ် ။
ဒီထက်ပိုပီးဆိုးလာရင်တော့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ သွားပေါက်နေတဲ့ မေးရိုးအထိပါရောက်လာပြီး သွားဟာ ယိုင်နဲ့လာပါတော့တယ် ။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ သွားဟာ ကျွတ်ထွက်သွားတော့တာပါပဲ ။
ဒါကတော့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းမှုမကောင်းလို့ သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။
သွားဖုံးရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဒီလို လက္ခဏာတွေကို တွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
သွားဖုံးက နီနီရဲရဲနဲ့ တင်းပြောင်ပြီးရောင်နေမယ် ။
ခံတွင်းနံ့ ဆိုးရွားမယ် ။
ခံတွင်းထဲမှာလည်း အရသာက မကောင်းဘူး ။ ပုတ်အဲ့အဲ့လို အရသာမျိုးရမယ် ။
သွားတွေ ကြွလာမယ် ။ ယိုင်နဲ့လာမယ် ။
သွားပတ်လည် အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ပြည်တွေတည်လာမယ် ။
တံတွေးထဲ သွေးတွေပါလာမယ် ။
သွားတိုက်တဲ့အခါ၊ အစာမာမာတွေစားတဲ့အခါ၊ တံတွေးထွေးတဲ့အခါ သွေးတွေပါလာမယ် ။
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးမကောင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပဲ သွားဖုံးကနေသွေးထွက်နိုင်တဲ့ တခြားအကြောင်းအရင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ။ ဒါတွေကတော့….
ဗီတာမင် စီ နဲ့ ဗီတာမင် ကေ ချို့တဲ့ခြင်း ။
ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်း ။ ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ။
ပိုးဝင်ခြင်း ။ ( Infection) ဥပမာ – သွားကြားထိုးခြင်းကြောင့် သွားဖုံးရောင်လာခြင်း ။
သွားတိုက်ရာတွင် အားဖြင့် အလွန်အကျွံဖိ၍တိုက်၍ သွားဖုံးပေါက်ပြဲသွားခြင်း ။
သွေးကင်ဆာ စတဲ့ အခြေအနေေတွေကြောင့်လည်း သွားဖုံးကသွေးထွက်နိုင်ပါတယ် ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ သွားဖုံးရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် သွားနှင့်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ ။
သွားဖုံးတွေရောင်တာဟာ သွားသန့်ရှင်းရေးမကောင်းတဲ့အချက်က အဓိကအကြောင်းအရင်းဆိုတော့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို စနစ်တကျနဲ့ အထူးဂရုစိုက်လိုက်ရင် တစ်ပတ်အတွင်း သွေးထွက်တာတွေ ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
တစ်ပတ်ခန့်သေသေချာချာဂရုစိုက်တာတောင် သွားဖုံးကနေသွေးယိုနေတာက မရပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ မိမိပြနေကျ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်းမှာ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ။
ဒီလို သွားဖုံးကသွေးထွက်တဲ့ လူနာတွေက သွားဖုံးရောင်တဲ့ အဆင့်လေးပဲဆိုရင် ဆေးခန်းမှာ သွားသန့်ရှင်းရေး (Scaling) လုပ်ရုံပါပဲ ။
သွားဖုံးကနေသွေးထွက်တာကို ဂရုမထားပဲ ပစ်ထားမိပြီးမှ အခြေအနေက သွားတွေလွုပ်လာပြီ၊ ပြည်တွေထွက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ သွားအကြောထုတ်ကုသမွုတွေ သွားနူတ်တာတွေ လုပ်ရနိုင်ပါတယ် ။ ပိုးသတ်ဆေးတွေလည်းသောက်ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒါဆို အချိန်တွေကုန် ငွေတွေကုန် လူလည်းပင်ပန်း ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေဆို ငွေတွေကုန်တာမှ သွားသန်ရှင်းရေးလုပ်တာထက် (၁၀) ဆခန့် ပိုကုန်ကျနိုင်ပြီး ရက်ချိန်းကလည်း အနည်းဆုံး သုံးလေးခါ ဖြစ်သွားရော ။
ဒီတော့ သွားဖုံးကနေသွေးထွက်တာက နာတာတွေ မဖြစ်ဘူးဆိုပေမယ့် သတိထားမိတာနဲ့ အချိန်မဆွဲသင့်ပဲ စောစီးစွာကုသမွုခံယူသင့်ကြောင်း ဂရုစိုက်သင့်ကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။